War Cusub oo laga soo saaray dhaawaca Xiddiga Kylian Mbappe? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
War Cusub oo laga soo saaray dhaawaca Xiddiga Kylian Mbappe?
(14-6-2018) Xiriirka kubada Cagta dalka France ayaa war qoraal ah ka soo saaray dhaawaca Weeraryaahnka 18 Sano jirka ah ee dalkaas Kylian Mbappe kaas oo dhaawac uga baxay Tababarka maalinkii Talaadada.
Faransiiska ayaa cadeeyey in uu diyaar yahay boqolkiiba boqol Kylian Mbappe kulanka ugu horeeya koobka aduunka ee ay lacayaari doonaan dalka Australia isla Markaana dhaawaca soo gaaray uusan ahayn sidii loo malayanayey.
Dalalka Australia iyo France ayaa dheeli doona kulankooda koowaad ee koobka adduunka Maalinka Sabtiga ah ee bishaan ay tahay 16 Waxaana lacadeeyey in Kylian Mbappe uu diyaaryahay kulankaas.
Wiilkaan yar aad Warbaahintu shaacisay in uu soo gaaray dhaawac daran markii ay isku dheceen daafaca Adil Rami xili ay kujireen Tababarka koobka aduunka 2018 waxaase soo yeeray War ay aad ugu farxeen Jamaahiirta dalka France kaas oo ah in uu Caafimaad taamyahay.